Frequently Asked Questions မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Question 1. How can I purchase products? SUNNY eSTORE မှာ ဘယ်လို‌ ‌ဈေးဝယ်ရမလဲ။
Products can be easily purchased on the SUNNY eSTORE website at https://sunny.com.mm/ first. You can browse our categories or sub-categories, or use the search bar to find your products. When you find the product you like, “click” Add to Basket or Buy Now, then “click Continue Shopping or ” follow the instructions to checkout. “It’s that simple!”
လူကြီးမင်း နှစ်သက်ရာ ကုန်ပစ္စည်းများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ SUNNY eSTORE website https://sunny.com.mm/ တွင်လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ရှေးဦးစွာ ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ သို့မဟုတ် အမျိုးအစားခွဲများ သို့မဟုတ် ရှာဖွေရန်နေရာတွင် မှာယူလိုသည့် ပစ္စည်းအားရှာဖွေရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ထို့နောက် ဈေးဝယ်ရန်အတွက် “Continue Shopping” ကိုနှိပ်ပါ (သို့မဟုတ်) ဈေးဝယ်ယူမှုမှ ထွက်ခွာရန်အတွက် ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။ “ဒါဟာရိုးရှင်းပါတယ်”
Question 2. I need to createanew account to buy? ဈေးဝယ်ရန်အကောင့်အသစ်ဖွင့်ဖို့လိုအပ်ပါသလား။
You don’t need to createanew account or log in to SUNNY eSTORE to makeapurchase, as long as you enter your email, phone number, and delivery address during checkout.
Creating your own account however offers you the benefit of storing contact information, havingacomplete record of your past orders, and sharing additional information with us that would allow us to send you personalized offers. You can create your SUNNY eSTORE account inaquick and easy process by either just logging in with your Facebook or Google account, or signing up with your email address. If you create an account using an email address, you will receiveaconfirmation email shortly after.
SUNNY eSTOREတွင် ဈေးဝယ်ယူရန် အကောင့်အသစ်မလိုအပ်ပါ၊ လူကြီးမင်း၏ အီးမေးလ် လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပတ်၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးပို့ရမည့်လိပ်စာ (နေရပ်လိပ်စာ) ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ဖွင့်မည်ဆိုပါက ယခင်ကဝယ်ယူထားသည့် မှတ်တမ်းများကို လွယ်ကူစွာ ရှာနိုင်ရုံမျှမက သင်၏အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းပေးမည်ဖြစ်ရာ ဝယ်ယူမည့် အကြိမ်တိုင်း ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းရန် မလိုအပ်တော့ပါ။ အကောင့်အသစ် ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက သင်၏ Facebook အကောင့်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ Google အကောင့်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း အီးမေးလ်လိပ်စာ ဖြင့်သော်လည်းကောင်း လွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက်ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အထက်ပါ အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ မိတ်ဆွေမှာယူထားသော ပစ္စည်းများအား အတည်ပြုစာ ပေးပို့အကြောင်းကြားပေးပါသည်။
Question 3. Are the products on SUNNY eSTORE authentic? SUNNY eSTORE တွင်ရောင်းချသောပစ္စည်းများမှာ အစစ်အမှန် ဟုတ်ပါသလား။
Yes! All our products come with the SUNNY Trust Guarantee.
This means that we only work with credible retail partners and authorized distributors only. All products from SUNNY eSTORE are 100% authentic and brand new. All of our foreign products are legally imported.
ဟုတ်ကဲ့၊ မှန်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ SUNNY eSTORE သည် တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော ကုမ္ပဏီ (သို့) ဖြန့်ချီသူများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် ပစ္စည်းမှန်ဖြစ်ကြောင်း ၁၀၀% အာမခံပါသည်။ နိုင်ငံခြားမှ တင်သွင်းသော ပစ္စည်းများမှာလည်း တရားဝင်တင်သွင်းသော ပစ္စည်းများ ဖြစ်ပါသည်။
Question 4. How do I know when the order is confirmed? မှာယူထားသောပစ္စည်းများ အတည်ဖြစ်ကြောင်းမည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
We will send you an email or sms after you have ordered on SUNNY eSTORE. We also reconfirm all orders we received. Our order confirmation team will directly call you to confirm your purchase details and take down any delivery preferences .
SUNNY eSTORE မှ မှာယူထားသော ပစ္စည်းများအတည်ပြုကြောင်းကို အီးမေးလ်ဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်းမတ်ဆေ့ဖြင့်သော်လည်းကောင်း အတည်ပြုစာတိုများ ပေးပို့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများမှလည်း မှာယူထားသော ပစ္စည်းများအတည်ပြုရန် ဖုန်းခေါ်ဆို ပေးမည်ဖြစ်သည်။
Question 5. How can I change the products that I ordered? မှာယူထားသောပစ္စည်းများအား မည်သို့ လဲလှယ်ရမည်နည်း။
If your order needs to be changed after confirmation, please call us at 09891749489 or message us on SUNNY eSTORE Facebook at messenger m.me/sunny.estore, and our customer support team will be happy to help you.
လူကြီးမင်း မှာယူထားသော ပစ္စည်းများ အတည်ဖြစ်ပြီးနောက် ဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်းအားလဲလှယ် လိုပါက ဖုန်းနံပတ် ၀၉ ၈၉၁၇၄၉၄၈၉ သို့ဖုန်းခေါ်၍ သော်လည်းကောင်း SUNNY eSTORE ဖေ့စ်ဘုတ်မတ်ဆင်ဂျာ m.me/sunny.estore မှ တဆင့် စာပို့ကာ အကြောင်းကြားပါက ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းများမှ ပစ္စည်းလဲလှယ်ခြင်း အားကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
Question 6. How do I cancel my order? မှာယူထားသော ပစ္စည်းများအား မည်သို့ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသနည်း။
You can start the process of order cancellation by calling us at 09891749489 or messaging us on SUNNY eSTORE Facebook at messenger m.me/sunny.estore . Our customer support team will be happy to help you.
လူကြီးမင်း မှာယူထားသော ပစ္စည်းများ အတည်ဖြစ်ပြီးနောက် အဆိုပါဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်းအား ပယ်ဖျက်လိုပါက ဖုန်းနံပတ် ၀၉ ၈၉၁၇၄၉၄၈၉ သို့ဖုန်းခေါ်၍ သော်လည်းကောင်း စာတိုပေးပို့ခြင်းဖြင့် သော်၎င်းဖေ့စ်ဘုတ် m.me/sunny.estore သို့စာပို့ကာပြောကြားပါက ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းများမှ ပစ္စည်းလဲလှယ်ခြင်းအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
Question 7. Why was my order cancelled? အဘယ်ကြောင့် အကျွန်ုပ်၏ အမှာစာ ပယ်ဖျက်ခံရတာလဲ။
Cancelling an order is one of the last things we want to do, but some situations come up where cancellation is the best option to save you time and money.
The most common reasons an order might be cancelled are:
- Request from the customer to cancel
- Customer is uncontactable for5days after the order was placed
- Incomplete contact information, preventing us from reconfirming the order or making the delivery
- The purchased item has become out of stock with our merchants
If you have given us your contact information, you will receive an email, phone call, or message from us if any part of your order is canceled or if we need additional information to process your order. Any payment made for the order will be refunded upon cancellation.
အမှာစာများပယ်ဖျက်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မတတ်နိုင်သည့်အဆုံး ပြုလုပ်လိုက်ရသော လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုသို့ပယ်ဖျက်ခြင်းသည် သင်၏အချိန်နှင့် ငွေကို သက်သာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
- မှာယူထားသူမှ ပယ်ဖျက်ရန်တောင်းဆိုခြင်း
- ပစ္စည်းများရောက်ရှိသောအခါ ကာစတန်မာအား ဆက်သွယ်၍ မရခြင်း
- ကာစတန်မှာမှ ဖြည့်စွက်ရသောချက်အလက်များ(ဖုန်းနံပတ်၊နေရပ်လိပ်စာ) ဖြည့်ရာတွင် မပြည့်စုံခြင်း
- merchants များဘက်တွင် ပစ္စည်းများ ပြတ်လပ်သွားခြင်း
- ပစ္စည်းမှာယူစဥ် ဖြည့်စွက်ထားသောအချက်အလက်များမပြည့်စုံခြင်းများကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ မှာယူ ထားသော ပစ္စည်းများအား ပယ်ဖျက်လိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ မှာယူထားသော အမှာစာများအား ထပ်မံအတည်ပြုခြင်း၊ ပစ္စည်းပေးပို့ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။အကယ်၍ ငွေပေးချေထား ပါကလည်း KBZPay မှတဆင့်ပြန်အမ်းငွေများကို လွှဲပေးမည်ဖြစ်သည်။
Question 1. What kinds of payment methods can I use to pay for my orders? ဘယ်လိုနည်းနဲ့ငွေပေးချေလို့ရလဲ။
We offer KBZPay and Cash on Delivery.
KBZPay isamobile wallet platform powered by KBZ Bank, one of the most trusted banks in Myanmar. It’s the safer, simpler and more convenient way to transact money. With KBZPay you can pay for your orders online, and there is no need to pay cash at the point of delivery.
If you don’t have KBZPay, you can choose the option to pay cash on delivery.
For high-value products (above 200,000Ks) you may also be eligible to pay with KBZPay shopper loan. If you areasalaried employee and are eligible for the loan (as determined by KBZPay), this option allows you to make purchases withaflexible monthly payment plan over 6, 12, or 24 months that is suited to your needs.
SUNNY eSTORE တွင် လက်ရှိ ကုန်ပစ္စည်းလက်ခံရရှိမှ ငွေချေစနစ်၊ KBZPay ဖြင့် တိုက်ရိုက်ကြိုတင် ငွေလွှဲစနစ်များဖြင့် ပေးချေဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
KBZဘဏ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူသုံးအများဆုံးနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသောဘဏ်တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်သောကြောင့် KBZ ဘဏ်မှ ပြုလုပ်ထားသော KBZPay သည်ငွေလွှဲပြောင်းရန် ပိုမိုလွယ်ကူသော နည်းလမ်း ဖြစ်သည်။
KBZPay မရှိပါက ပစ္စည်းရောက်ငွေချေစနစ် ဖြင့်ပေးချေနိုင်ပါသည်။
တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းများ (ကျပ်နှစ်သိန်းအထက်) အားလည်း အရစ်ကျငွေချေစနစ်ဖြင့် ပေးချေဝယ်ယူနိုင် ပါသည်။ အကယ်၍ လခစားဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကလည်း KBZPay မှချမှတ်ထားသော အချက်အလက်များဖြင့် မိမိနှစ်သက်ရာ ၆လ၊ တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်အစီအစဥ်ပေးချေစနစ် အားရွေးချယ်ကာ အရစ်ကျပေးချေစနစ်အား လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Question 2. How do I pay with KBZPay? KBZPay နဲ့ဘယ်လိုပေးချေရမလဲ။
If you are usingamobile phone which has KBZPay installed, you will be automatically redirected to the KBZPay app after checkout.
သင်၏ မိုဘိုင်းဖုန်းတွင် KBZPay application အား ဒေါင်းလုပ်ဆွဲကာ အချက်အလက်များဖြည့်ပြီး အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
If you are usingatablet, laptop or personal computer, you will be redirected toascreen with the KBZPay QR code. Please scan this QR code with the KBZPay app on your mobile phone to pay for your order. We ask that you also enter the order number in the KBZPay 'optional notes' field so we can confirm your payment more easily.
အကယ်၍ သင်သည် တက်ဘလက်၊ လက်တော့ပ် (သို့) ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြုနေပါက KBZPay QR ကုဒ်ရှိသည့် မျက်နှာပြင်တစ်ခုသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်မှာယူထားသော ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ငွေပေးချေရန် QR code ကို သင်၏ မိုဘိုင်းဖုန်းရှိ KBZPay အက်ပ်ဖြင့် Scan ဖတ်ပါ။ သင်၏ငွေပေးချေမှုကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ အတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက် KBZPay 'optional notes' အကွက်ထဲတွင် သင်၏အမှာစာ အမှတ်ကို ဖြည့်စွက်ပေးရန်တောင်းဆိုပါသည်။
Question 3. What are the benefits of paying with KBZPay? KBZPay နဲ့ငွေပေးချေရင် ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်တွေရနိုင်လဲ။
KBZPay is the safer, simpler and more convenient way to transact money. You can pay for your orders online, and there is no need to pay cash at the point of delivery. You can get refunded easily in case of returns or any changes to your order, and you can maintainacomplete transaction history for all your payments.
KBZPay သည် ငွေလွှဲခြင်းအတွက် ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချလွယ်ကူသော နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်၏အွန်လိုင်း အမှာစာ အတွက် အွန်လိုင်းမှ ငွေပေးချေနိုင်ပြီး ပစ္စည်းလာပို့သည့်အချိန်တွင် ငွေသားပေးရန် မလိုအပ်တော့ပါ။ သင်၏အမှာစာ အပြောင်းအလဲများရှိခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြန်အမ်းငွေ ပြန်လည်ထုတ်ယူရန်လိုအပ်ပါက လွယ်ကူစွာငွေပြန်အမ်းပေးမည်ဖြစ်ပြီး သင်၏ငွေပေးချေမှုအားလုံး အတွက် စာရင်းအပြည့်အစုံကို သင်၏ လုပ်ဆောင်မှု မှတ်တမ်းတွင် ပြန်လည်ကြည့်နိုင်သည်။
Question 4. What do I do if I need assistance in buying online? အွန်လိုင်းမှဈေးဝယ်ရာတွင် အကူအညီလိုပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
Please use the following communication channels.
1. Phone: 09891749489
2. Facebook messenger: Sunny eStore on FB Messenger
3. Email: support@sunny-estore.com
အွန်လိုင်းဈေးဝယ်ရာတွင် အကူအညီလိုအပ်ပါက အောက်ပါလင့်ခ်များသို့ အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
၁။ ဖုန်း- ၀၉၈၉၁၇၄၉၄၈၉
၂။ ဖေ့စ်ဘုတ် မတ်ဆင်ဂျာ- Sunny eStore on FB Messenger
၃။ အီးမေးလ်- support@sunny-estore.com
Shipping and Delivery ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်း
Question 1. How long does it take for orders to be delivered? ပို့ဆောင်ချိန် ဘယ်လောက်ကြာသလဲ။
The delivery time for your order depends on your order location. Estimated Delivery time are as follows:
Yangon Region: 6-8 days
Other States & Region: 8-12 days
Please note that in exceptional cases, delivery may be delayed due to product availability from merchants, or travel restrictions related to COVID. You will be able to track the status of your order after purchase.
ပို့ဆောင်ချိန်မှာ မှာယူသူ၏ နေရပ်ဒေသပေါ် မူတည်ပါသည်။ ခန့်မှန်းခြေရောက်ရှိချိန်မှာ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသအတွင်း - ၆ရက်မှ ၈ ရက်
အခြားပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး- ၈ရက်မှ ၁၂ ရက်အတွင်း
ယခုအခါ COVID ၏ ခရီးသွားလာခွင့် ပိတ်ပင်ထားမှုကြောင့် သော်လည်းကောင်း ကိုယ်စားလှယ်များတွင် ပစ္စည်း ပြတ်လပ်ခြင်းတို့ကြောင့် ကြန့်ကြာမှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။
Question 2. Will I receiveacall before delivery? ပစ္စည်းမပို့ခင် ဖုန်းကြိုဆက်ပေးပါသလား။
Yes. We will call you before attempting the delivery, and when the delivery team arrives at your location. If you are not contactable at the time of delivery, the team will continue to try for5days, at which point we may need to cancel the order.
ဟုတ်ကဲ့ ဆက်သွယ်ပေးပါတယ်။ လူကြီးမင်း၏ အိမ်သို့ ပစ္စည်းမပို့ဆောင်မှီ delivery မှ ဖုန်းကြိုဆက် ပေးပါသည်။ အကယ်၍ ပစ္စည်းလက်ခံမည့်သူအား ငါးရက်တိုင်တိုင် ဆက်သွယ်၍မရပါက အဆိုပါမှာ ယူထားသော ပစ္စည်းအားပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်သည်။
Question 3. Where do you deliver? မည်သည့်နေရာများသို့ ပို့ဆောင်ပေးပါသလဲ။
We deliver to all cities and townships within the Republic of the Union of Myanmar, with only certain exceptions, for example areas that may be under travel restrictions due to government guidelines.
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီးများသို့ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။သို့သော် အစိုးရမှ ခရီးသွားလာခွင့် ပိတ်ပင်ထားသော နေရာများတွင်မူ ပို့ဆောင်၍ မရနိုင်ပါ။
Question 4. How much is the cost of delivery? သယ်ယူ ပို့ဆောင်ခ ဘယ်လိုကောက်ခံပါသလဲ။
We provide free delivery for all orders over 20,000MMK around Myanmar. For transactions that are below 20,000MMK we haveanominal fee of 1,500MMK for delivery.
ကျွန်ုပ်တို့ SUNNY eSTORE တွင် ငွေကျပ် နှစ်သောင်းနှင့်အထက် ဝယ်ယူပါက ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့ စနစ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အရပ်ရပ်သို့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ငွေကျပ်နှစ်သောင်းအောက် ဝယ်ယူပါက ပို့ဆောင်ခ ၁၅၀၀ ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။
Question 5. How can I track my order after I have made the purchase? ဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်းအော်ဒါ၏ အခြေအနေများအား မည်သို့သိရှိနိုင်ပါသလဲ။
You can track the status of your order at any time by clicking “View your order” in the email confirmation you would have received after completing your order. You can also call us at 09891749489 or message us on Facebook at m.me/sunny.estore, and our customer support team will be happy to help you.
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် “ မှာယူထားသော ပစ္စည်းများအားကြည့်ရှုရန်” ဟူသောနေရာတွင် အမှာစာ အတည်ဖြစ်မဖြစ် ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် ၀၉ ၈၉၁၇၄၉၄၈၉ သို့ဖုန်းခေါ်ဆို၍ သော်လည်းကောင်း ဖေ့စ်ဘုတ် မတ်ဆင်ဂျာ m.me/sunny.estore မှတဆင့် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Question 6. Why is my order delayed? ပစ္စည်းဘာကြောင့် ကြန့်ကြာတာလဲ။
မှာယူထားသော ပစ္စည်းများမှာ ဝယ်ယူသူများခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းများ ပြတ်လပ်သွားနိုင်ပြီး ကြန့်ကြာမှု များဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ရောက်ရှိမည့် ခန့်မှန်းရက်အသစ်အားလည်း “အမှာစာအခြေအနေ” တွင် ဖော်ပြထားသောကြောင့် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Return and Refund ငွေပြန်အမ်းခြင်းနှင့် ပစ္စည်းလဲလှယ်ခြင်း
Question 1. What is your return policy? ပစ္စည်းပြန်လည်ပေးပို့ဖို့ ဘယ်လိုသတ်မှတ်ချက်တွေရှိလဲ။
All our products come with the SUNNY Trust Guarantee. This means that if they are damaged or do not work as promised, and the manufacturer does not offerawarranty on the products, we will take them back within 14 days and refund your money.
Our general policy lasts 14 days. If 14 days have gone by since your purchase, unfortunately we can’t offer youarefund exchange. To be eligible forareturn, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging. Please see detailed terms in the relevant category. For more details on returns and refunds, please read our policies on this page: https://sunny.com.mm/policies/refund-policy
ကျွန်ုပ်တို့၏ SUNNY eSTORE ရှိ ပစ္စည်းများအား ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါ သည်။ဆိုလိုသည်မှာ ပစ္စည်းများ ပျက်စီးထိခိုက်ခြင်း များနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များက warranty card မပေးထားသော ပစ္စည်းများအတွက် ၁၄ရက်အတွင်း ပြန်အမ်းငွေရယူနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ ၁၄ရက် ကျော်လွန်သွားပါက ပြန်အမ်းငွေ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းလဲလှယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခွင့်ရှိမည် မဟုတ်ပါ။ပစ္စည်းများ ပြန်လည်ပေးပို့မည် ဆိုပါက မူလထုပ်ပိုးမှုပုံစံ မပျက်စီးဘဲ အသုံးမပြုရသေးသော ပစ္စည်းဖြစ်မှသာ လဲလှယ်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။အသေးစိတ် အချက်အလက်များ အား လေ့လာလိုပါက အောက်ပါလင့်ခ်တွင် https://sunny.com.mm/policies/refund-policy ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Question 2. My product is not working. How can I return it? ဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်းအသစ် အသုံးပြု၍မရပါက ဘယ်လိုလဲလှယ်နိုင်သလဲ။
If your product is not working, please let us know as soon as possible by calling us at 09891749489 or messaging us on Facebook at m.me/sunny.estore. Our customer support team will be happy to help you.
အကယ်၍ သင်ဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်းအသစ် အသုံးပြု၍မရပါက ကျွန်ုပ်တို့အား ဖုန်းခေါ်ခြင်း၊ Sunny eSTORE ဖေ့စ်ဘုတ်မတ်ဆင်ဂျာ m.me/sunny.estore မှ သော်လည်းကောင်း လျင်မြန်စွာဆက်သွယ် အကြောင်းကြားပေး ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုဌာနမှ ပစ္စည်းလဲလှယ်ခြင်းအား ကူညီဆောင်ရွက် ပေးမည်ဖြစ်သည်။
Question 3. How will I get refunded if I return my product? ပစ္စည်းပြန်လဲပါက ပြန်အမ်းငွေ ဘယ်လိုပြန်ရမလဲ။
We will refund via KBZPay into your account.
KBZPay မှတဆင့် လူကြီးမင်း၏အကောင့်ထံသို့ ပြန်အမ်းငွေအား လွှဲပေးမည်ဖြစ်သည်။
Question 4. How long will it take to receive the refund? ပြန်အမ်းငွေရဖို့ ဘယ်လောက်ကြာအောင်စောင့်ရမလဲ။
Once your product is received and inspected, we will contact you to notify you that we have received your return item. If your refund request is approved, your refund will be processed within 7-21 working days.
လူကြီးမင်း၏ ပစ္စည်းအား လက်ခံရရှိပြီး ပစ္စည်းအားစစ်ဆေးပြီးပါက ပြန်အမ်းငွေတောင်းခံခြင်းအား အတည်ပြု အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။ ပြန်းအမ်းငွေ ကြာချိန်မှာ ၇ရက်မှ ၂၁ ရက်အတွင်း ကြာမြင့်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
Question 5. Do I have to pay for shipping charges for return? ပစ္စည်းပြန်လဲရာတွင် ပို့ဆောင်ခ ပေးချေရန် လိုအပ်ပါသလား။
No. As part of our SUNNY Trust Guarantee, we are offering free shipping for all returns currently .
SUNNY eSTORE မှ ပစ္စည်းပြန်လဲရာတွင် ကျသင့်မည့် ပို့ဆောင်ခများကို တာဝန်ယူသောကြောင့် ဝယ်ယူသူမှပေးချေရန် မလိုအပ်ပါ။
Question 6. How long will it take to receive the return feedback? ပစ္စည်းလဲလှယ်မှု ကြာချိန်နှင့် အခြေအနေအား မည်သို့ သိရှိနိုင်မည်နည်း။
We will contact you via SMS, Facebook or email within 2-5 working days of receiving the returned item at our warehouse, where we will evaluate it for quality and complete the rest of the return process.
ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ ပစ္စည်းလက်ခံရရှိပြီး အလုပ်လုပ်ရက် ၂ရက်မှ ၅ရက်အတွင်း ဖုန်းမတ်ဆေ့ဂျ်၊၊ ဖေ့စ်ဘုတ် မတ်ဆင်ဂျာ နှင့် အီးမေးလ်များမှ တဆင့် အသိပေးအကြောင်းကြား မည်ဖြစ်သည်။
Question 7. Conditions for Return. ပစ္စည်းလဲရာတွင် ရှိရမည့်ပစ္စည်းအခြေအနေ
1.The product must be unused, unworn, and without any flaws.
၁။ မှာယူထားပြီး လဲလှယ်မည့်ပစ္စည်းကို အသုံးမပြုရပါ၊ တံဆိပ်ဖြုတ်ခြင်း မရှိစေဘဲ အပြစ်အနာအဆာကင်းသော ပစ္စည်းဖြစ်မှသာ လဲလှယ်ပေးပါမည်။
2.Please keep the product intact, with original accessories, user manual and warranty cards in the original packaging at the time of returning the product.
၂။ အဆိုပါ ပြန်လဲမည့်ပစ္စည်းတွင် ပစ္စည်းနှင့်တကွ မူရင်းတံဆိပ်များ၊ သုံးစွဲသူလက်စွဲ၊ Warranty ကဒ်၊ အခမဲ့ရရှိထားသော လက်ဆောင်ပစ္စည်းများအား SUNNY eSTORE ဗူးနှင့်တကွ ပြန်ထည့်ပေးရမည်။
3.The product must be returned in the original and undamaged manufacturer packaging or box.
၃။ အဆိုပါလဲလှယ်မည့်ပစ္စည်း နှင့် SUNNY eSTORE မှပို့ဆောင်ထားသော ထုတ်ပိုးမှု (သို့) ဗူးအား အပျက်အစီး မဖြစ်စေရပါ။
4.Free replacement will be provided within7days if the product is delivered in defective/damaged condition or different from the ordered item.
၄။ မှာယူထားသော ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် ပျက်စီးသွားသော ပစ္စည်းများကို အလုပ်လုပ်ရက် ၇ ရက်အတွင်း လာရောက်လဲလှယ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
5.If you receiveadamaged device, please makeareplacement request within 48 hours of order delivery.
၅။ အကယ်၍ မှာယူထားသော ပစ္စည်းများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်ပါက ၄၈နာရီအတွင်း လဲပေးမည်ဖြစ်သည်။
Question 8. Return Policy Per Category. ပစ္စည်းအမျိုးအစားလိုက် ပစ္စည်းပြန်လဲရာတွင် လိုက်နာရမည့်သတ်မှတ်ချက်များ
လျှပ်စစ် ကရိယာ ပစ္စည်းများ
If you received your item as in damaged or incorrect / incomplete condition, return or refund will be issued. For device-related issues (electronics), please contact the brand warranty provider directly.
If you wish to return an electronic device like phones, Laptop and tablets, please make sure that you have removed all such personal information from the device prior to returning.
Please note that you can ask forareturn or refund within10 days after receiving.
ဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်းများ မှာ မပြည့်စုံခြင်း၊ မမှန်ကန်ခြင်း၊ ချွတ်ယွင်းပျက်စီးမှုများရှိပါက ပစ္စည်းလဲလှယ်ခြင်း၊ ပြန်အမ်းငွေ တောင်းဆိုခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ လျှပ်စစ်နှင့်ဆက်စပ်သော ပစ္စည်းများအား Warranty card တွင် ပါရှိသော အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များအား တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ လျှပ်စစ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြစ်သော ဖုန်း၊ Laptop နှင့် Tablets များအား လဲလှယ်လိုပါက၊ အဆိုပါ ဖုန်းနှင့် Laptop ထဲရှိ မိမိ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်ဒေတာများအား ဖယ်ရှားရန်လိုအပ်ပါသည်။
သတိပြုရန်မှာ အဆိုပါ လျှပ်စစ်နှင့်ဆက်စပ်သော ကိရိယာပစ္စည်းများ လဲလှယ်လိုပါက ပစ္စည်းလက်ခံရရှိပြီး ဆယ်ရက်အတွင်းတွင်သာ လဲလှယ်ခွင့်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
If you received your item as in damaged or incorrect / incomplete condition, return or refund will be issued. For device-related issues (electronics), please contact the brand warranty provider directly .
ဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်းများ မှာ မပြည့်စုံခြင်း၊ မမှန်ကန်ခြင်း၊ ချွတ်ယွင်းပျက်စီးမှုများရှိပါက ပစ္စည်းလဲလှယ်ခြင်း၊ ပြန်အမ်းငွေတောင်းဆိုခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ လျှပ်စစ်နှင့်ဆက်စပ်သော ပစ္စည်းများအား Warranty card တွင် ပါရှိသော အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များထံ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
If you received your item as in damaged or incorrect condition, return or refund will be issued.
”Change of mind” reason is not applicable for those items.
ဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်းများ မှာ မပြည့်စုံခြင်း၊ မမှန်ကန်ခြင်း၊ ချွတ်ယွင်းပျက်စီးမှုများရှိပါက ပစ္စည်းလဲလှယ်ခြင်း၊ ပြန်အမ်းငွေ တောင်းဆိုခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဝယ်ယူသူမှ မိမိဆန္ဒအရ မှာယူထားသော စားသောက်ကုန် ပစ္စည်းများအား လဲလှယ်ခြင်း ပြုလုပ်ခွင့်မရှိပါ။
ဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်းများ မှာ မပြည့်စုံခြင်း၊ မမှန်ကန်ခြင်း၊ ချွတ်ယွင်းပျက်စီးမှုများရှိပါက ပစ္စည်းလဲလှယ်ခြင်း၊ ပြန်အမ်းငွေ တောင်းဆိုခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ လျှပ်စစ်ဆက်စပ် ပစ္စည်းများဖြစ်ပါက Warranty Card တွင်ပါရှိသော ရောင်းချသူအား တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အလှကုန်နဲ့ ကျန်းမာရေး ပစ္စည်းများ
If you received your item as in damaged or incorrect / incomplete condition, return or refund will be issued. Please note that to keep as in original condition, seal and unused.
ဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်းများ မှာ မပြည့်စုံခြင်း၊ မမှန်ကန်ခြင်း၊ ချွတ်ယွင်းပျက်စီးမှုများ ရှိပါက ပစ္စည်းလဲလှယ်ခြင်း၊ ပြန်အမ်းငွေ တောင်းဆိုခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် မိမိလဲလှယ်လိုသည့်ပစ္စည်းမှာ တံဆိပ်များ ပျက်ယွင်းခြင်း၊ အသုံးပြုထားခြင်းမရှိစေဘဲ နဂိုမူလအနေအထားတွင်ရှိနေမှသာ လဲလှယ်ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။
Shopper Loan ဈေးဝယ်ချေးငွေ
Question 1. Who Can Apply for KBZPay Shopper Loan? KBZPay ဈေးဝယ်ချေးငွေကို ဘယ်သူတွေလျှောက်လို့ရလဲ။
All salaried employees who are KBZPay Level2customers can apply for the loan.
KBZPay Level2 ရှိတဲ့ လခစားဝန်ထမ်းတိုင်းလျှောက်လို့ရပါတယ်။
Question 2. What is the requirement to apply foraKBZPay Shopper Loan? KBZPay ဈေးဝယ်ချေးငွေလျှောက်ဖို့ ဘာစာရွက်စာတမ်းတွေ လိုအပ်လဲ။
- Ward Recommendation within3months
- Electricity Bill from last month
- Payslip (or) Salary Recommendation Letter from employer for the past three months
- NRC card
- လွန်ခဲ့တဲ့ ၃လ အတွင်းရယူထားတဲ့ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ
- လွန်ခဲ့တဲ့ ၃လ အတွင်းရရှိထားတဲ့ လစာပြေစာ
- တစ်လအတွင်းရရှိထားတဲ့ အလုပ်မှ ဝန်ထမ်းဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်
- လွန်ခဲ့တဲ့ ၁လကပေးဆောင်ထားတဲ့ လျှပ်စစ်မီတာဖြတ်ပိုင်း
- မှတ်ပုံတင် (ကျော၊နောက်)
- ဘဏ်စာရင်း အချက်အလက် သို့မဟုတ် ဘဏ်စာအုပ် (စာအုပ်အဖုံးနှင့် နောက်ဆုံးစာရင်း စာမျက်နှာ)
Question 3. How do I apply for the KBZPay Shopper Loan? KBZPay ဈေးဝယ်ချေးငွေ ကို ဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲ။
Firstly you must haveaKBZPay Level2account, from the KBZPay app there isaKBZPay Loan Center. Secondly Click the KBZPay Loan Center and choose the Shopper Loan. After that you can fill the documents per requirements.
ပထမဦးဆုံး KBZPay Level2account ရှိရပါမယ်။ KBZPay ထဲက KBZPay ဈေးဝယ်ချေးငွေ ကိုရွေးပေးပါ။ ထို့နောက် အပေါ်ဆုံးရှိ ဈေးဝယ်ချေးငွေမှ ကြည့်ရှုမည်ကို နှိပ်ပါ၊ လျှောက်လွှာဖြည့်မည် ကို နှိပ်ကာ လိုအပ်သည့်အချက်များကိုဖြည့်၍ ချေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
You can learn more about the KBZPay Shopper Loan including the application criteria and process on this website: www.kbzpay.com/en/promotion/shopper-loan/
ဤဝဘ်ဆိုက်တွင် www.kbzpay.com/en/promotion/shopper-loan/ KBZPay Shopper Loan၏ အရစ်ကျ ပေးချေစနစ်လျှောက်ရာတွင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ ဖော်ပြထားသောကြောင့်အသေးစိတ် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
If you would like to get any assistance, you can also start your Shopper Loan application journey by selecting the product and installment plan you would like on SUNNY eSTORE. During checkout, select your payment option as KBZPay (with credit), and our team will get back to you shortly with instructions on how you can apply for the KBZPay Shopper Loan.
အရစ်ကျပေးချေစနစ်လျှောက်ထားရန် အကူအညီလိုအပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ SUNNY eSTORE တွင် သင်နှစ်သက်သော ပစ္စည်းအမျိုးအစားအား KBZPay (with credit) နှင့်ပေးချေမည်ဟု ရွေးချယ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏အရစ်ကျ ပေးချေစနစ်ဌာနမှ ဝန်ထမ်းများက ဆက်သွယ်ကာကူညီပေးပါသည်။
Question 4. What do I need to prepare to apply for the Shopper Loan while collecting the documents? KBZPay ဈေးဝယ်ချေးငွေ လျှောက်ထားတဲ့အချိန်မှာ တခြားဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုလဲ။
You need to use the KBZPay for transferred money, online shopping payment via KBZPay and mobile Top Up while you are collecting the related documents to apply for the KBZPay Shopper Loan.
KBZPay Shopper Loan လျှောက်ထားရန် သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ စုဆောင်းနေစဥ် ငွေလွှဲခြင်း၊ Online Shopping အတွက် ငွေပေးချေမှု၊ မိုဘိုင်းငွေဖြည့်ခြင်းများအတွက် KBZPay ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
Question 5. How Long does it take for my Shopper Loan application to be processed? KBZPay ဈေးဝယ်ချေးငွေ လျှောက်ပြီး ချေးငွေရဖို့ ဘယ်လောက်ကြာအောင်စောင့်ရမလဲ။
It will take2to3working days. You will be notified of the status after KBZPay has reviewed your application.
စာရွက်စာတမ်းများတင်ပြီးနောက် အလုပ်လုပ်ရက် ၂ရက်မှ ၃ရက်အတွင်း ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။ သင်ချေးငွေရကြောင်း သင်၏ KBZPay accountတွင် ဖော်ပြမည်ဖြစ်သည်။